Mai Chibwe VekwaZimuto: Kutumidza mwana zita.
Kutumidza mwana zita.
Munyika medu pachirudzi chedu tese vatauri vemitauro inohi chiShona, chiNdebele, chiChewa, chiVhenda, chiKalianga etc, tinofarira chose kutumidza vana mazita ane zvaanoreva. Tinofarirazve kupa vana mazita anotaridza zvatinofungira vamwe vanhu vemhuri kana vatakavakidzana navo, kuti pese pavanoona mwana uyu vahwisise zvatinofunga pamusoro pavo.
Kuna muroora akasvika pamusha akaoneswa nhamo mhuri isingadi kuti agarepo, paanozoita mwana anokwanisa kuda kuti mhuri ihwisise nhamo yavakamupa obva atumdza mwana zita rinoenderana nazvo. Kotizve mafambire ari kuita matongegwe enyika anoitisa kuti vana vapiwe mazita anoenderana nokuona kunoita vabereki pazviri.
Vabereki vakapinda dzimwe chechi dzinoshandisa mavara echirungu vanokwanisa kuda kupa vana vavo mazita anoenderana nezviri kuitika kuchechi. Semazuvano kune vaporofita vakawanda vanoita masaramusi pamberi pevateveri vavo. Mubereki akaona saramusi richiitwa anokwanisa kuda kutumidza mwana zita resaramusi riya.
Kozoita vamwe vabereki vanotimidza mwana mavara echirungu avanohwa muzheve kunakidza kuadana asi vasingahwisisi kuti vara racho kumusha kwaro kwarakatanga rinorevei. Kakawanda vabereki vakadai vanopa vana mazita asina kukodzera kupiwa mwana.
Vabereki vakawanda vanoona sokuti mwana ndewavo sezvakangoita ufumi hwavo, zvokuti chido chomubereki ndicho chinoitwa pamwana. Izvi hazvina kuipa kana mubereki achihwisisa kuti mwana uyu achakura agokwanisawo kufambafamba munyika dzakawanda achiita zvinodiwa noupenyu hwake. Zvichaitika kuti zita riya ramamupa rinomuita asekwe nevanosangana naye. Muupenyu vanhu havana rudo newe kana usina zvinhu zvakaita semari.
Apa tiri kuti kana mafunga kupa mwana zita rechirungu, kana rerurimi gusiri gwenyu, tangai mabvunza vatauri verurimi kuti vara iri rinorevei. Zvadaro moritarisazve muDictionary morihwisisa musati mapa mwana zita. Zvikuru musapa mwana mavara aya anohi ma ADJECTIVE muchirungu. Ndiwo mavara anowanzovhiringa vanhu pakumaita mazita.
Pana ndawana mazita kawanda chose anoshandiswa muZimbabwe semazit evana. Zvitarisirewo wega kana uchifunga zvokutumidza mwana zita. Hwisisa zvinoreva zita ugofunga kuti ndizvo here zvauri kuda kutaura pamusoro pemwana wako. Kana wahwisisa wochitumidza hako mwana wako.
Mazita evana muZimbabwe
Notus (Not Us)
Hwisisazve kuti unokwanisa kuva munhu uya anoseka mazita evamwe vanhu, usingazivi kuti mubereki ndiye anopa munhu zita. Uchaonazve kuti mwana wako anokwanisa kukura agodanana nomukomana/musikana ane zita riya rawaiseka. Zvinokwanisikazve kuti mwana wako akure agoita vana vakevo agovapa mazita iwawo ausingadi.
Posted by Mai E Chibwe at 06:31
Murume/mukadzi anobvumidzwa kuhura
Mibvunzo nemhinduro 2
Murume anoramba kurhoja mukadzi
Michini yokuzvibatsira kubvisa zemo.
Mukadzi anoramba kurhojewa